Ny Diabe 2ª ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fihinanam-bilona: Avelao ny olona hisaina! - Ny Martsa Manerantany
Home » About us » Fampandrenesana » Ny Diabe 2ª ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fihinanam-bilona: Avelao hoentina ny olona!
Ny andro taorian'ny hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny 2ª World Martsa fihavanana sy tsy hiady, Pressenza nanana fahafahana mba hamita ny asa fananganana ny mariky ny fandriampahalemana sy ny tsy fanaovana herisetra amin'ny tanora avy amin'ny sekoly samihafa ny Madrid, mba hiresaka ny mpandrindra, Rafael de la Rubia, avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena humanist, Mundo sin Guerras y Violencia.
Pressenza: Ahoana ny hevitrao momba ny fanombohana omaly?
Rafael de la Rubia: Eny, zavatra maro. Izany dia famintinana dingana iray; ny sehatra ny fiomanana sy anie isika mba efa nanapa-kevitra momba ny efa ho herintaona lasa izay, fa ny omaly dia ny fanoloran-tena sy mafy mba hanao fitaovana faharoa, ny fihetseham-po isika dia afaka manana be dia be ny fanampiana ary dia tena ilaina tokoa nomena ny toe-javatra any.
Ao amin'ny loharanon'ny lahatsoratra: Pressena Iraisam-pirenena misahana ny Press - 10.11.2018 - Madrid, Espaina - Tony Robinson
Sokajy Fampandrenesana Ticket navigation
Lazao anay ny hevitrao
Mamela fitaratra aho
Rehefa misintona voalohany miaraka amin'ny bokotra sosialy ianao dia manangona ny mombamomba ny mombamomba ny daholobe avy amin'ny kaontinao navoakan'ny mpampiasa tambajotra sosialy, araka ny safidinao manokana. Mahazo ny adiresy mailaka koa izahay mba hananganana kaonty ho anao amin'ny tranokalanay. Raha vao namorona ny kaontinao ianao, dia miditra amin'io kaonty io.
fanehoan-kevitra vaovao amin'ny fanaraha-maso valiny vaovao ho an'ny fanamarihako
Fiaramanidina momba ny World March Paper
Fihaonana niarahana tamin'ny filohan'ny Faritra Nouakchot
Chili, tetikasa fanilihana ny ady
Feo, horonantsary, festival ary paella
Horonantsary, fandraisana ary ny volana martsa ao Tenerife
Ny Rékonin'ny ULL dia mandray ny volana martsa